Sababaha maalinta 10aad ee bisha Muharram loo soomo iyo waxa ku soo arooray in sidaasi la… – Hagaag.com
Sababaha maalinta 10aad ee bisha Muharram loo soomo iyo waxa ku soo arooray in sidaasi la…
Posted on 29 Agoosto 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Caashuuraa waa maalinka tobnaad ee bisha Muxarram, waana maalinta uu Eebbe ka badbaadiyey Nebi Muuse, naxariis iyo nabadgalyo korkiisa ha ahaatee iyo reer bani Israel ciidamadii Fircoon, sidaa darteed Nebi Muuse ayaa soomay maalinkaasi si uu Allah ugu mahad celiyo, kadibna waxaa sidiisii oo kale yeelay Nebi Muxamed NNKH, sidaasina ummadiisa kula dardaarmay inay yeelaan.
Waxay ku beegan tahay taariikhda Islaamka maalinti la dilay Hussein bin Ali, oo ka tirsanaa qoyska Nebi Muxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, oo lagu dilay Dagaalkii Karbala.
Maalinta tobnaad ee bisha Muxarram waxaa loogu magac daray Caashuuraa iyada oo sidaasi darteed loo sharfay, waana magac islaami ah oo saafi ah oo aysan Carabtu aqoonin xilliyadii Islaamka ka hor ee jaahiliyada, in kasta oo laga yaabo inay ka dhaxleen xurmayntiisa diintii Nebi Ibraahim NNKH.
Sababta loo soomayo:
Waxaa la wariyey in Nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soomi jiray caashuuraa waagii Islaamka kahor, sidoo kale qurayshna way soomi jirtey, markii uu madiina tagayna Nabi Muxamed NNKH wuxuu la kulmay yuhuuda oo soonta, sidaa darteed Rasuulka Allah wuxuu ku amray Muslimiinta inay soomaan.
Bukhaari ayaa ka weriyey Ibnu Cabbaas inuu yidhi: “Nebigu wuxuu yimid Madiina wuxuuna arkay Yuhuudda oo sooman maalinta Ashura, markaasuu yiri: waa maxay waxaas? Waxay yiraahdeen: maanta waa maalin wanaagsan, waa maalintii Ilaahay ka badbaadiyey Banii Israel cadawgoodii, markaasuu Muuse soomay wuxuuna yiri: waxaan aniga idinkaga dhowahay ama mudannahay Muuse, sidaa darteed wuu soomay dadkana wuu faray.
Dadka Waxgaradka ama fuqahada ahaa ayaa ku kala aragti duwan, horta soonka Cashuura ma wuxuu ahaa intaan la fardhi yeelin ramadaanka ma wuxuu ahaa waajib ama khasab ama Sunno oo la adkeeyey? Abu Hanifa iyo Axmad ayaa waajibnimadiisa isku raacay, laakin Al-Shafici wuxuu ku tilmaamay sunno la adkeeyey oo keliya.
Soonkiisa waxa uu u leeyahay mudnaan ama fadli weyn dadka Ahlu sunnada iyo Wal jamacah, sidaa darteed soonkiisu waxa uu ka saamaxaa dunuubta sanadkii ka horreeyay, waxaa sidaasi soo weriyey Muslim oo Nebigu ayaa yidhi: “Soonka maalinta Carafo Allah wuxuu kuu qorayaa inuu kaa saamaxo sanadka kii ka horeeyey iyo kan dambe, halka soonka Caashuuraa Allah wuxuu kuu qorayaa inuu kaa saamaxo sanadka kan ka horeeyey”. فقد روي مسلم في صحيحه عن النبي قوله صيام يوم عرفة احتسب علي الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده, وصيام يوم عاشوراء احتسب علي الله ان يكفر السنة التي قبله.
Waxaa mudan in la soomo sagaalaadka bisha Muxarram si loo khilaafo Yuhuuda, waayo iyagu waxay soomaan oo xurmeeyaan keliya maalinta Caashuuraa, taasna waxaa ugu wacan Nebigu NNKH xadiiskiisa wuxuu ku yiri: “Haddii Eebe idmo sanadka dambe waxaan soomeynaa maalinta sagaalaad.”
Ashura iyo dadka Shiicada
Qadarka Eebbe waxay noqotay inuu shahiido Xuseen bin Cali, Allaha ka raalli noqdee maalintii 10ka bisha Muxarram, dagaalkii caanka ahaa ee Karbala, marka maalintani waxay Shiicada u leedahay astaan ​​gaar ah, waxayna leeyihiin dabaaldegyo u gaar ah.